Manao ahoana ny habetsahan'ny Digital Marketing miankina amin'ny SEO?
Efa mba nanontany tena ve ianao hoe ahoana no ahafahan'ny SEO fiantraikany amin'ny fantsom-pahitalavitra dizitaly? Tsy mbola nahitana valiny mazava ve? Tsy misy ahiahy. Androany, hanazava anareo amin'ny an-tsipiriany ny habetsaky ny varotra ao amin'ny Internet miankina amin'ny safidy fikarohana.
Mety efa fantatrao fa efa niova be ny SEO nandritra ny taona vitsy lasa. Nivoatra izany ary nandeha lavitra kokoa noho ny tsy fahampian'ny teknolojia efa mahazatra izay efa nalaza tamin'ny taona 1990 tany ho any.Tamin'ny taona 2005, na dia orinasa madinika sy fanombohana aza no nanomboka nandrahoina ny SEO, izay nampanantena fa hanampy amin'ny fitomboan'ny fifamoivoizana sy ny varotra - programa de fotografia online gratis.
Tsy misy mandà fa ny 201 SEO dia mbola mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampiroboroboana ny orinasan-tserasera. Ny tetikady fanatsarana ny fikarohana fikarohana dia mitondra vokatra tena tsara raha ampiharina tsara. Noho izany, andeha isika hiditra lalindalina kokoa amin'ity lohahevitra ity ary hijery ny habetsaky ny marketing ara-nomerika miankina amin'ny SEO.
Fandraisana anjara fototra amin'ny SEO
Ny androany, ny ankamaroan'ny mpivarotra an-tserasera sy web-designers dia ahitana ny tetikady SEO fototra amin'ny tetikady dizitaly. Izany dia noho ny amin'izao fotoana izao dia ny SEO dia efa misy sivana sy tafiditra kokoa noho ny hatramin'izay. Miara-miasa amim-pahombiazana amin'ny sehatra ara-barotra hafa izy isan'andro. Ireto misy sasantsasany amin'ireny fitsipika ireny:
Strategy Content: Content dia mpanjaka, tombontsoa SEO manan-kery, fitaovana matanjaka - miantsoa azy izay tianao. Tsy azo lavina fa ny ankamaroan'ny tetibolan'ny SEO dia miankina amin'ny famoronana votoaty. Ny fametrahana tetikady votoaty mahomby miaraka amin'ny SEO dia afaka manatsara haingana ny fifanakalozan-dresaka fa koa ny fahamendrehan'ny marika.
Marketing ara-tsosialy: Manentana ny hampifangaro ny programan-tserasera amin'ny tambajotra SEO ny tetikasam-piarahamonin'ny SEO mba hahatratrarana ny tebitebin'ny SEO. Ny hetsika ara-tsosialy dia tonga lafatra satria mitondra loharano voajanahary ho an'ny loharano. Ankoatra izany, dia manondro izy ireo raha toa ka mahomby tsara ny tetikadinao ao anaty votoatiny na mitaky fanavaozana.
Paid Search: Amin'ny fampifangaroan'ny Google Analytics sy ny SEO, afaka mamaha olana maimaim-poana ianao, ka mahazo fandrindrana organika. Ny ekipa mpikaroka dia afaka miara-miasa amin'ny ekipa SEO amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny antony maromaro, anisan'izany ny drafitra betaveta, ny pejy mitongilana, ny paikady interactif ao anaty ary ny tsipika mandeha.
Fifandraisana amin'ny besinimaro: Ny fitantanana ny onjam-peo an-tserasera dia dingana lehibe iray hafa amin'ny paikady SEO. Ireo ekipa PR dia afaka mandray soa be indrindra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny SEO: Ny filazan'ny tarika dia afaka mampiroborobo ny: ny fisian'ny aterineto sy ny fijerena fikarohana.
Fiovàna: Ny fampifangaroana ny tetikady fiovàna sy ny SEO dia afaka miteraka vokatra voajanahary. Raha toa ianao ka mifanandrify amin'ny traikefa an-tranonkalanao tsara indrindra amin'ny mpampiasa dia hitondra mpampiasa sahaza ho an'ny tranonkalanao ianao. Eritrereto ny famakiana sarintany ho an'ny hafanana mba hahatakaranao kokoa ny mpampiasa anao. Iangavio ihany koa ny UI anao.
Araka ny hitanao, miara-miasa amin'ny sehatra maro samihafa ny SEO ao anatin'ny marketing marika nomerika.
SEO dia zavatra manan-danja: isaky ny mahita karazana fikarohana vaovao isika. Ny zavatra tsara indrindra azonao atao mba hahalalanao ny fifanakalozan-kevitrao dia ny hazava sy mazava amin'ny ekipa nomerika anao. Ampahafantaro azy ireo ny zavatra ataonao, ambarao azy ireo ny dingana manaraka, zarao ny hevitrao SEO miaraka amin'ny manampahaizana amin'ny nomerika ary jereo izay mitranga ao anatin'ny iray volana. Angamba, tianao ny vokatry ny fiaraha-miasa toy izany!